तीब्र गतिका कारण बस दुर्घ`टना हुदा २२ यात्रुको मृ`त्यु ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियतीब्र गतिका कारण बस दुर्घ`टना हुदा २२ यात्रुको मृ`त्यु !
तीब्र गतिका कारण बस दुर्घ`टना हुदा २२ यात्रुको मृ`त्यु !
पाकिस्तानमा एउटा बस दुर्घ“ टना हुँदा कम्तीमा २२ यात्रुको मृ“त्यु भएको छ । दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानको दुर्गम स्थानमा सडकबाट खा`ल्डोमा खस्दा महिला र बालबालिकासहित २२ यात्रुको मृ“त्यु भएको हो ।
बलुचिस्तान प्रान्तको किल्ला सैफुल्लाह जिल्लामा सो दुर्घ´`टना भएको हो । सहायक जिल्ला प्रशासक मोहमद क्वासिमका अनुसार दुर्घ“टनामा सबै जनाको मृ“त्यु भएको छ । तीब्र गतिका कारण दुर्घ“टना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
दुर्घ“टनाको समयमा मौसम खराब रहेको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार तीब्र गतिका कारण बस अनियन्त्रित भएर पहाडको खोँचमा खसेको थियो । दुर्घ“टनाप्रति पाकिस्तानका राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
याे पनि, वर्षायाम सुरु भएसँगै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खाेला आसपास क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ । गएराति ठूलाे वर्षापछि मेलम्ची खाेलामा आएकाे बाढीले अस्थायी संरचनामा क्षति पुर्याएकाे छ । गएरातिको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका नं ७ र ११ जाेड्ने फट्टेमा रहेकाे अस्थायी ह्युम पाइप कल्भर्टमा क्षति पुर्याएको हो ।
पुलमा क्ष`ति पुगेसँगै सडक बन्द भएको छ । यातायात आवतजावतका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न मेलम्ची नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ । ‘आज रातिको वर्षाको कारण खाेलाको बहाव बढ्दा मेलम्ची बजारमा रहेको र फट्टेमा रहेको अस्थायी ह्युमपाइप कल्भर्टमा क्षति पुगेको छ ।
यातायात आवत जावतमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नु हुन सम्पूर्णमा अनुरोध छ’ मेलम्ची नगरपालिकाका इन्जिनियर जितबहादुर कार्कीले भन्नुभयो ।
मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख आइतमान तामाङले फट्टेको ह्युमपाइप मर्मत गरेर एक हप्ता सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भयाे । मेलम्ची इन्द्रावती जोड्ने पुलमा भने क्ष`ति नपुगेको तामाङले बताउनुभयो ।
मङ्कीपक्स्काे जाेखिम बढ्दाे क्रममा; ब्राजिलमा पनि पहिलाे पटक मङ्कीपक्स् पुष्टि !
चीनको सिचुआनमा भर्खरै शक्तिशाली भूकम्पकाे घक्का, क्षेति बारे जानकारी आउनै बाँकि !
३ मिनेटको अन्तरमा २ वटा शक्तिशाली भूकम्प, यति धेरैकाे मृ-त्यु
अमेरिकाको ओक्लाहो बाट आयाे सबैलाई रु`वाउने यस्ताे दु:खद खबर !